Ngemuva kokuthenga izibuko zelanga, kuyaqabukela ukuthi banake ukunakekelwa kwezibuko zelanga. Mhlawumbe abanye abantu bacabanga ukuthi ngiyigqoka kuphela kuleli hlobo, futhi abantu abaningi bacabanga ukuthi bathenga izibuko zelanga kuphela ukuvikela imisebe ye-ultraviolet nemfashini. Ngokuqondene nezinye izibuko zelanga, ngeke bakubheke ...
Ungazikhetha Kanjani Izibuko Zobuso Bakho
Wake waba nenkinga yokuzama ukuthola ukuthi hlobo luni lohlaka olulungele ubuso bakho? Kahle unenhlanhla! Ngomhlahlandlela wethu omncane, uzofunda ukuthi kukhona ifreyimu yawo wonke umuntu - futhi singakutshela ukuthi yini okukulungele kakhulu kuwe! Nginobuso obunjani? Kungenzeka ukuthi une ...
IZhejiang Baolai Group Co., Ltd.yibhizinisi elikhulu elizimele elihlanganisa ukukhiqizwa kwezingilazi, ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa, nokungenisa nokuthekelisa izimpahla. Inkampani yethu inezimboni ezintathu ezindaweni eziphezulu zomndeni, izitolo ezi-2 maphakathi nedolobha lokuhweba, i-t yangaphandle ...